के तपाई खोज ईन्जिनहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ यदि तपाई ड्रपल प्रयोग गर्नुहुन्छ? | Martech Zone
के तपाई खोज ईन्जिनहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ यदि तपाई ड्रपल प्रयोग गर्नुहुन्छ?
मङ्गलबार, अप्रिल 26, 2011 बुधबार, अक्टोबर 15, 2014 जोन निलो
सामग्री प्रबन्धन प्रणाली र एसईओ
कति सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (CMS), जस्तै WordPress, Drupal, जुमला!, मा एउटा भूमिका खेल्नुहोस् खोज इन्जिन अनुकूलन (SEO)? निश्चित रूपमा खराब साइट डिजाइन (सफा युआरएलहरू, नराम्रो सामग्रीहरू, डोमेन नामहरूको नराम्रो प्रयोगहरू, इत्यादि) मा जस्तै CMS Drupal एसईओ लाई प्रभाव पार्दैछ (खराब तरिकाले प्रयोग गर्ने उत्कृष्ट उपकरणहरू)। तर के सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली आफैंमा अरू भन्दा राम्रो SEO लाई उधारो दिन्छन्, यदि अन्य सबै राम्रो अभ्यासहरू गरियो भने? र, कसरी मिक्स गर्ने प्रणालीहरू (उदाहरणका लागि, वर्डप्रेस वा ड्रपल ब्लग समर्थन ए Shopify साईट) एसईओ लाई असर गर्छ (फेरि के लगाईरहेछ कि अन्य सबै राम्रा एसईओ अभ्यासहरू पछ्याइन्छन्)?
खोज इञ्जिन दृष्टिकोणबाट, त्यहाँ Drupal, WordPress, वा Shopifififier फरक छैन। म "एक मिनेट प्रतीक्षा गर्नुहोस्" को साथ हिट हुनुभन्दा पहिले मलाई स्पष्ट पार्नुहोस्। खोज ईन्जिनहरूले HTML मा हेर्दछन् जुन उनीहरूलाई लिंकहरू क्रॉल गर्दा तिनीहरूलाई फिर्ता दिइन्छ। तिनीहरूले वेबसाइट पछाडिको डाटाबेस हेरिरहेका छैनन् र तिनीहरूले साइट कन्फिगर गर्न प्रयोग गरिएको प्रशासक पृष्ठमा हेरेनन्। के खोज ईन्जिनहरूले हेरिरहेका छन् सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली द्वारा HTML उत्पन्न गरिएको, वा रेन्डर गरिएको हो।
Drupal, एक CMS को रूपमा, PHP कोड, एपीआई, डाटाबेस, टेम्प्लेट फाईलहरू, CSS, र जाभास्क्रिप्टको वेबपृष्ठको एचटीएमएल (एरर रेन्डरिंग) को प्रक्रियाको प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। HTML भनेको खोज ईन्जिनले के हेरिरहेको छ। यस रेन्डर गरिएको HTML ले सबै प्रकारका जानकारी समावेश गर्दछ जुन सर्च इन्जिनले वेब पृष्ठलाई वर्गीकृत गर्न र कोडिफाइ गर्न प्रयोग गर्दछ। त्यसोभए जब कसैले भन्छन् कि एउटा CMS अर्को SEO प्रयोजनका लागि अर्को भन्दा राम्रो छ, यहाँ के भनिन्छ वास्तवमै "राम्रो" CMS खोज ईन्जिनको लागि "उत्तम" HTML रेन्डर गर्न मद्दत गर्दछ।
उदाहरण को लागी: Drupal प्रयोग गर्दा तपाईले खोल्ने विकल्प छ सफा यूआरएलहरू। तपाईंले सफा यूआरएलहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन, तर जब तपाईं गर्नुहुनेछ, तपाईंले एक यूआरएल पाउनुहुनेछ जुन मानवले बुझ्न सक्दछ (उदाहरण: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / परामर्श / मार्केटिंग)। र हो, सफा URL हरूले SEO लाई मद्दत गर्न सक्छ।
अर्को उदाहरण: Drupal, यस मार्फत पठौटो मोड्युल, पृष्ठको शीर्षकको आधारमा अर्थपूर्ण यूआरएलहरू सिर्जना गर्दछ। उदाहरण को लागी, "तपाइँको बच्चाहरु को लागी १० गर्मी गतिविधिहरु" शीर्षक भएको पृष्ठले स्वचालित रूपमा http://example.com/10-summer- Activities-for-your-kids को URL प्राप्त गर्दछ। तपाईले पठोटो प्रयोग गर्नुपर्दैन तर तपाईले पृष्ठ युआरएललाई व्यक्तिलाई पढ्न र याद गर्न सजिलो बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ।
अन्तिम उदाहरण: साइट नक्शा खोज ईन्जिनलाई मद्दत गर्नुहोस् तपाईंको साइटमा के छ। जब तपाईं मैन्युअल्ली (साइट) नक्सा बनाउन र गुगल वा बिंगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ, यो कम्प्युटरमा उत्तम अनुकूल कार्य हो। Drupal को XML Sitemap मोड्युल हुनै पर्छ किनकि यसले साइट नक्सा फाईलहरू स्वचालित रूपमा उत्पन्न र मर्मत गर्दछ र खोजी इञ्जिनहरूमा पेश गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
गुगल वा बिंग यति रुचि राख्दैनन् कि तपाईं ड्रपल प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्दैनन्, उनीहरू वास्तवमै चिन्ता गर्दछन् ड्र्रपलको आउटपुट। तर तपाईले Drupal को प्रयोगको बारे ख्याल राख्नु पर्छ, किनभने यो एक उपकरण हो जसले SEO मैत्री HTML र URL सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँदछ।
संक्षिप्त एक तरफ ... Drupal मात्र एक उपकरण हो। यसले वेबसाइट सेटअप गर्न र चलाउन आवश्यक सुविधाहरू र कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंको लागि उत्कृष्ट पोष्टहरू लेख्दैन। त्यो अझै तपाइँमा निर्भर छ। कुनै पनि एसईओ रैंकिंगलाई प्रभाव पार्न तपाईंले गर्न सक्ने नम्बर एक कुरा जानकारी छ जुन राम्रोसँग लेखिएको छ, विषयको लागि अर्थपूर्ण हो, र समयको साथ निरन्तर सिर्जना गरिएको हुन्छ।
टैग: CMSसामग्री व्यवस्थापन प्रणालीDrupalDrupal खोज इञ्जिन अनुकूलनDrupal SEOएसईओ
चाचा + आईफोन: सतर्कताहरू, भूगोल, उत्तरहरू, साझेदारी गर्दै
गुगल विज्ञापन नीति - ती नियमहरू पालना गर्नुहोस्!
अप्रिल 26, 2011 मा 9: 33 PM
तपाईं एकदम सही हुनुहुन्छ, जोन... खोज इन्जिनहरूले तपाईंको CMS के हो वास्ता गर्दैनन्। जे होस्, धेरै सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूसँग काम गरिसकेपछि, म तपाईंलाई बताउन सक्छु कि बजारमा धेरै पुराना प्रणालीहरू छन् जसमा पूर्ण रूपमा अनुकूलन गर्न आवश्यक सुविधाहरू छैनन्। robots.txt, sitemaps.xml अपडेट गर्ने क्षमता, खोज इन्जिनहरू पिंग गर्ने, पृष्ठहरू ढाँचाहरू (तालिका लेआउटहरू बिना), पृष्ठ गतिको लागि अनुकूलन गर्ने, मेटा डाटा अपडेट गर्ने... तपाईंले धेरै सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई बाधा पुर्‍याउने कुरा फेला पार्नुहुनेछ। नतिजाको रूपमा, ग्राहकले पूर्ण रूपमा लिभरेज नभएको सामग्रीमा कडा परिश्रम गर्दछ।
अप्रिल 28, 2011 मा 12: 55 PM
तपाईं सही हुनुहुन्छ, जोन। म Quora मा धेरै प्रश्नहरू भेट्छु र अरूहरू द्वारा कुन CMS SEO को लागि उत्तम हो। जवाफ केवल कुनै पनि नयाँ सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूको बारेमा हो जसमा सफा URL हरू बनाउन र खोज इन्जिनहरू प्रयोग गर्न मन पर्ने धेरै उपकरणहरू प्रयोग गर्ने क्षमता छ।
@Doug - तपाईं पनि सही हुनुहुन्छ। पुरानो सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरू प्रायः एसईओमा राम्ररी संलग्न हुने क्षमताको कमी हुन्छ।
जुन 19, 2011 मा 1: 27 PM
केहि अवस्थामा, आधुनिक CMS ले पनि नकारात्मक, वा कम्तिमा, SEO मा इष्टतम प्रभाव भन्दा कम हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, Joomla सँग साइट-व्यापी मेटा विवरण सिर्जना गर्न कन्फिगरेसन सेटिङ छ जुन प्रत्येक पृष्ठमा लागू हुनेछ जहाँ लेखकले अनुकूलन मेटा विवरण सिर्जना गर्दैन। यसले मेरा केही क्लाइन्टहरूलाई पृष्ठको लागि अनुकूलित विवरणहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दैन भन्ने अनुमान गर्न नेतृत्व गरेको छ।
एक अनुभवी सामग्री लेखक को लागी, यो एक मुद्दा हुनेछैन। यद्यपि, सबै सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूले लेखकहरूको लागि पट्टी कम गर्दछ, कम-अनुभवी लेखकहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै सामग्री योगदान गर्न सक्षम पार्दै, अनुकूलन सरोकारहरूको बारेमा अनजान।
अक्टोबर 21, 2011 बिहान 1:10 बजे
ठीक छ CMS ले HTML लाई आउटपुट गर्दैछ त्यसैले पक्कै पनि तिनीहरूले SEO लाई असर गर्छ। Drupal SEO को लागि ठीकसँग कन्फिगर गर्नको लागि पूर्ण पीडा हो, तपाईले मनोनयन गर्न सक्ने कुनै पनि कुराको लागि। xml साइटम्यापहरू, मैत्री URL हरू (सधैँ /नोडमा फर्किन्छ), स्वतन्त्र URL हरू/पृष्ठ शीर्षकहरू/हेडिङहरू, img alt ट्यागहरू, ब्लगिङ (मलाई सुरु नगर्नुहोस्, Drupal मा ब्लगिङ WP मा केही छैन)।
हामीलाई ठूला साइटहरूको लागि Drupal मनपर्छ, तर SEO'ify गर्न रमाइलो छैन। WP खगोलीय रूपमा सजिलो छ।